Imikhuleko enamandla engu-3 yokubuyisa umsebenzi wakho ?
3 imithandazo enamandla yokubuyisa umsebenzi. Umsebenzi uhlala uyisizathu sokukhathazeka, ngisho nakulabo abalahlekelwe umsebenzi abawuthanda kakhulu. Umbuzo "kodwa ngenzeni?" Akunqamuki izingqondo zethu futhi singabaza ikhono lethu. Kepha iqiniso liwukuthi, imvamisa isizathu sokudalwa komhlaba akusizi ngalutho kuwe futhi kwenzeka ngezizathu ezingaphezu kwamandla akho. Umkhonyovu unzima futhi kunzima ukuwuthatha, ngakho-ke sifuna ukukunika amandla amancane okubuyisa umsebenzi wakho olahlekile. Bheka imisho emi-3 enamandla yokubuyela emsebenzini ukukusiza ekufuneni kwakho ukubuyela emsebenzini wakho wakudala.
1 3 imithandazo enamandla yokubuyisa umsebenzi
2 Umkhuleko wokubuyisa umsebenzi ngokunxusa kosanta abaningana
3 Umkhuleko wokubuyisa umsebenzi kanye nokunxusa kweSan Antonio
4 Umkhuleko wokubuyiselwa kokusebenza ngokuxolelwa kukaSt
Bona futhi okunye okuqukethwe kuzwela, amasiko nemikhuleko ye- el mundo umsebenzi:
Umkhuleko wokubuyisa umsebenzi ngokunxusa kosanta abaningana
Hawu! Mama Othandekayo UMama Wethu Aparecida Owu Rita Ongcwele WaseCassia O Wami Okhazimulayo San Julius Tadeo, umvikeli wezimbangela ezingenakwenzeka. USanto Expedito, ingcwele ngomzuzu wokugcina kanye no-Saint Edwiges, usanta wabaswele angenelela noBaba kimi (yisho igama lakho eligcwele) ngiyamcela ukuba angisize ngibuyele emsebenzini wami ukuze bakwazi ukungishayela futhi, ngokuphuthumayo. Ngiyakudumisa ngikudumise njalo ngizokukhothamela. Thandaza: 1 Baba wethu nezinyoni zasolwandle ezi-3 ngithemba uNkulunkulu ngamandla ami onke futhi ngicela ukuthi akhanyise indlela yami nempilo yami, Amen
Isho lokhu umkhuleko wezinsuku ezi-3 zilandelana, uma kunokwenzeka ngasikhathi sinye. Futhi khetha indawo ethule futhi enokuthula lapho ungeke uphazamiseke khona, ukuze ukwazi ukugxila ngokuphelele enhlosweni yakho ngendlela enhle futhi ukholo kanye nesiqiniseko sokuthi lomusa uzotholwa.
Umkhuleko wokubuyisa umsebenzi kanye nokunxusa kweSan Antonio
«Uma ufuna izimangaliso, Iya eSan Antonio, Uzobalekela uSathane Nezilingo ezingapheli. Buyisa abalahlekile Ukwephuka kwejele okunzima, Futhi ekuphakameni kwesiphepho Vumela indlela yolwandle olukhathazekile. Ngokuncenga kwakho Inhlupho, iphutha, ukufa uyabaleka, Ababuthakathaka baba namandla Futhi baba abagulayo abanempilo. Buyisa okulahlekile ... (phinda amahlandla ama-3) Bonke ububi babantu Bumaphakathi, buyela emuva, Sitshele ukuthi ngubani obonile; Isho kanjalo iPaduan. Buyisa okulahlekile ... (phinda amahlandla ama-3) Udumo kuye uYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Njengoba kwakunjalo ekuqaleni, manje futhi njalo Amen. Buyisa okulahlekile… (phinda amahlandla ama-3) V. Sithandazele, U-Anthony oNgcwele obusisiwe. A. Sifanele izithembiso zikaKristu. Buyisa okulahlekile… (phinda amahlandla ama-3) Khuleka kuBaba Wethu bese udumisa uMariya.
Isho lokhu umthandazo wansuku zonke noma njengoba kudingeka, ukhanyise ikhandlela lokubonga kuSanta Anthony lapho kutholakala umusa. USanta Anthony ungoSanta okufanele sinxuse into elahlekile, ukuze ukwazi ukusebenzisa lokhu umkhuleko wothando, inhloso, imali noma yisiphi isimo esidinga ukubuyiselwa.
Umkhuleko wokubuyiselwa kokusebenza ngokuxolelwa kukaSt
“ISanto Antonio isihlahla saseMandingo, iSanto Onofre isihlahla iMirongueiro. O, oh, saint yami yaseCypriot ... Umuntu omnyama okwaziyo ukuthakatha kahle. Kwenze buthule, ukhuluma kancane kanti uyahlanya! ”San Cipriano, ngiyabonga. Ukuthi ithuba lokuthi (ngisho igama lakho eligcwele) ngithole umsebenzi engiwufunayo (yisho igama lenkampani yakho) yilona mkhulu kune- bangaki abantu abazofunda lo mlayezo! USaint Cyprian, umthakathi nomKrestu, olungile nomubi, onolwazi nobusayo kwezobuciko bakhe benkolo, ngikucela ngenhliziyo yami yonke, umzimba, umphefumulo nempilo ukufeza inhloso yokubuyisa lo msebenzi (yisho igama lenkampani). Ngicela wonke amandla aphakeme kaZiqu-zintathu Ongcwele, amandla olwandle, umoya, umlilo, imvelo nendawo yonke enze lo msebenzi uwele ezandleni zami futhi uboshwe yimi ngokuphelele (shono igama lakho eliphelele). Kwangathi lo msebenzi (usho igama lenkampani) ungaba owami kuze kube phakade, ukuthi ngaphansi kwalo MANDLA ONGCWELE lo msebenzi awukwazi ukuba owomunye umuntu ngaphandle kwami ​​(yisho igama lakho eligcwele). Vumela umphathi oqashile angaboni abanye abantu abazongenela ukhetho ngaphandle kwami ​​(chaza igama lakho eligcwele). Uma nje umphathi wokuqasha engangibizi (yisho igama lakho eligcwele) ukukutshela ukuthi umsebenzi ungowami, ngeke bajabule futhi njalo lapho bezwa igama lami (yisho igama lakho eligcwele) bazoqiniseka ukuthi nginguye umuntu engingathintana naye . umsebenzi Imbuzi eyisimangaliso eyakhuphuka intaba, ngilethele lo msebenzi (ake sithi igama lenkampani) engilidingayo nengilangazelelayo. Makube-njalo, kuzokwenziwa, kuzokwenziwa. Ngiyakholelwa futhi ngizoba nomsebenzi engiwufunayo kimi (nika igama lakho eligcwele) ingunaphakade ”.
Lokhu umkhuleko unamandla amakhulu futhi kufanele kwenziwe ngesikhathi Izinsuku ezi-3 ngasikhathi sinye ngokukholwa okukhulu kanye ne-positivity! Thatha imizuzu embalwa ucabange ukuthi impilo yakho ikulesi simo esisha, ngayo yonke injabulo le ebuyela emsebenzini wakudala izokulethela. Uma uzimisele ngempela ukuthi ukubuyela emsebenzini wakho wakudala iyindlela engcono kunazo zonke, hlola amasiko ama-4 we-blindproof ukuthola umsebenzi wakho futhi uqhubeke nokuqinisa isicelo sakho.
Funda imithandazo enamandla yokulala kangcono